Ulwazi - Qingdao JBD Machinery Co., Ltd
BONKE ULWAZI evela WEZABASEBENZI
plastic Modified "laba abathathu" ushintsho
Amaminerali wezinto ezifana calcium carbonate powder ukungezwa base resin, kudlalwa imisebenzi emikhulu inyuka ezintathu, ukusebenza ngcono nokusebenza yanda, esibizwa ngokuthi i-ukugcwaliswa plastic. Endabeni ukusebenza ukuhlangana, usebenzisa powder ngaphezulu, futhi enkulu indima Izindleko nokwehlisa. Yehlisa inani izinto uwoyela ezisekelwe ebomvu zokwenziwa resin esetshenziswa, iminikelo enkulu emphakathini. Njengoba umnotho China selingene enkulungwaneni "entsha okuvamile" futhi ushintsho mode sokukhula komnotho, ngaphezulu izimfuno entsha phezu plastic ukushintshwa. Ngo Jikelele, ukukhanya, ukusebenza kanye eco iyona isiqondiso ikusasa mboni.
Ngoba wezinto amaminerali powder kwabantu ephakeme kunaleyo kwabantu resin polymer (izikhathi 2-3), egcwele inhlanganiso impahla plastic kwandisa kakhulu ngenxa powder wanezela. Unit isisindo impahla, elihlanzekile resin kanye powder isilinganiso incane ngobukhulu, inombolo, ubude, area, okuyiwona intengo ibalwa, futhi ukulahlekelwa ngenxa ukwehla salezi zici ngokuvamile bulingana izinzuzo usebenzisa ezishibhile powder fillers. Ngaphezu kwalokho, isisindo somzimba futhi ukwandisa izindleko zokuhamba, abasebenzi kanye nezinye izindaba. Nokho, ucwaningo lwembula, ngokusebenzisa izinto zokusetshenziswa nobuchwepheshe futhi imishini emisha, "inkinga isisindo" zingaxazululwa ngezinga elithile.
Polypropylene (PP) flat, ngemva cishe izikhathi eziyisithupha izikhathi eqine, i-calcium carbonate powder izinhlayiya abahlakazekile PP zinhlayiya zakha ngokusebenzisa elula izimbobo ukuze isisindo efanayo impahla, layo flat wire obuphelele awushintshanga kakhulu, ngakho-ke imikhiqizo eqine okusezingeni eliphezulu izinkinga isisindo boni.
Blow umqolo ifilimu plastic ngesikhathi ukucutshungulwa nge elula ibhidi, isilinganiso elula iyashiyana ngezinto ezahlukene, kodwa ngokuvamile izikhathi ezimbili noma ezintathu. Futhi engeza esilinganayo powder umjovo olubunjiwe plastic impahla, kwabantu ifilimu kushaywa lincane kakhulu.
Imiphumela yokuhlolwa wabonisa nokuthi, ngisho umjovo udini, uma ungakwazi kahle ingcindezi umjovo futhi ubambe nengcindezi yesikhathi, ukwakhiwa ngokulinganayo kanye processing imishini, izinguquko ukuminyana impahla kufika ku 3 ~ 4% of yayo imikhiqizo umjovo ekubumbeni.
okufakiwe Plastic ephambene emakethe rally
izithasiselo Plastic emikhiqizweni plastic akhawunti ingxenye engaphansi kuka 8%, kodwa yayo phezu izakhiwo amapulasitiki ukucutshungulwa kanye nemikhiqizo ngcono futhi kuthuthukise indima ufeza indima ebalulekile. Uma isakhiwo e polymer inhlaka, ukukhethwa kanye isicelo kwezithako iwukuba ukunquma impumelelo nokwahluleka ukhiye umkhiqizo.
Njengoba i ukwesekwa sibaluleke amapulasitiki ekucubunguleni umkhakha, epulasitikini izithasiselo namazinga eziphambili, lizinga lomkhiqizo, intengo, ezithinta ngqo futhi ukunquma ezihlukahlukene inqubo yokubumba futhi imishini ukukhiqiza imikhiqizo plastic izinga nokubaluleka. Kungashiwo ukuthi amapulasitiki ekucubunguleni umkhakha and plastic imikhiqizo ukukhulisa namazinga kwezithako plastic uthuthukise njengoba kusengaphambili!
Eminyakeni yamuva, i-umkhakha asizayo selenze inqubekela phambili kakhudlwana futhi impumelelo. ukukhiqizwa Plasticizer kwesilinganiso, nobuchwepheshe, kanye nemikhiqizo izinga kanye nemikhiqizo izinhlobo kanye ezifuywayo nokwaneliswa izinga njalo ngcono; calcium ekilasini zinc ashisayo ejenti nzile umthamo, nezinhlobonhlobo futhi umthamo isicelo ngqo ukukhula, usawoti phambili esitebeleni ejenti Ingxenye okwengeziwe encishisiwe; kungekho Halogen, futhi ongaphakeme intuthu ukunwetshwa uhlobo ilangabi cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi ejenti organic Silicon ilangabi cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi ejenti zokukhiqiza ukuthuthukiswa wenza ukusebenza; isakhiwo esisha yamangqamuzana, kanye nohlobo ezinikezele antioxidant, nokukhanya esitebeleni ejenti izinhlobo njalo kukhiqizwa. Ngaphezu kwalokho, chemical yesivini ejenti, umthelela modifiers kanye zokugcoba, elihlangana ejenti, ama-ejenti antistatic, ama-ejenti nucleating kanye neminye imikhiqizo asizayo uzuze imiphumela ekhuthazayo.
Kusukela 2015 i umkhakha yokuthengisa zithé phansi, kodwa amathani inzuzo wekhasi lithuthukile, abanye ngisho avele ngokumelene isimo rally. Endabeni le amapulasitiki umkhakha sisonke akuyona ayemakhulu amathemba ababenawo, zokuthuthukisa umkhiqizo ungcono ezinye izinhlobo. Lezi kwentuthuko amapulasitiki izithasiselo ku ikhwalithi imikhiqizo kanye ukukhiqizwa, ngempumelelo ukusunduza futhi uphromotha amapulasitiki esetshenziswa kanye nokukhiqizwa nokuqhutshwa ukuthuthukiswa kanye nenqubekela phambili.
Ukuthintana ngqo impahla imithi iphakeji ongakhetha isiqukathi
Ngenxa ekufakeni izinto, futhi isitsha ukwakheka izidakamizwa by khetha izesekeli yasekuqaleni futhi inqubo ukukhiqizwa ezahlukene, izidakamizwa zokufaka impahla kanye esitsheni ku abanye amakhophi isigcawu kungenzeka ngeke kwaba ngokuthintana kwezidakamizwa ziyoncibilika phandle, futhi noma izidakamizwa iphutha ngalinye nezinye indima, futhi noma izidakamizwa eside sifakwe emanzini ukugqwala off amaphilisi kanye ngqo ukusebenza izidakamizwa quality; futhi kanjalo, abanye phezu izinga izidakamizwa kanye wobuntu umphumela efihle ucansi (ukuthi ngokusebenzisa ku izinga izidakamizwa kanye womuntu lokuvivinywa Jikelele angeke ezifike ngesikhathi ezisencwadini ka inkinga).
izimiso ekhethiwe nezimfuneko
1, ukusebenza emaphaketheni
Pharmaceutical ukukhiqizwa kwemboni, isitoreji, ezokuthutha, ukusetshenziswa kwezidakamizwa, ngesikhathi izidakamizwa, odlala ukuvikelwa izinga izidakamizwa, elula umsebenzi ukunakekelwa kwezempilo.
2, isimiso ukukhetha
Kumele esekelwe izici izidakamizwa okufunekayo izidakamizwa emaphaketheni izinto, ekwakhiweni ukukhiqizwa izinqubo, khetha ukukhanya, ukushisa, amakhaza, emisebeni avikele esihle isithiyo izakhiwo, umoya-mpilo, umhwamuko, nezinye izinto, ukuzinza zabo, futhi izinto izidakamizwa iphakeji iziqukathi noma ukudlulisa komunye nomunye.
Yamalahle ukuze olefin uxakekile abandayo kodwa hhayi ashisayo lapho
2015, China amalahle ibhizinisi olefin ungeze umthamo ukukhululwa ijubane ngokusobala behlisa, kuhlelwe kulo nyaka kufanele abe has ukukhiqizwa kudivayisi amathani angaphezu kuka-3 million, kodwa, njengoba Okthoba ekupheleni kudivayisi ukusabalala entsha can kuphela has Tung Wah Group of energy umfula iYangtze River Petrochemical futhi Pucheng ihlanzekile amandla, futhi ngokuvumelana umyalezo okunokwethenjelwa wathi, kulindeleke ukuba kulo nyaka kwesigamu ukukhiqizwa amathani 350,000 yesibili / neminyaka e-Inner Mongolia eside Thai kudivayisi amandla PP ngeke lihlehliselwe 2016, futhi kulindeleke ukuthi Novemba ekupheleni drive ye e ukhonkolo amalahle big, kulo nyaka ungakwazi ukushayela okwamanje namanje hhayi kudedelwa ukunquma umyalezo. Phakathi naleso sikhathi, Changzhou Fude, Guangzhou Petrochemical futhi Qinghai Salt Lake Ubuye ezahlukene isikhathi ukubambezeleka. Yamalahle ukuze olefin akuyona punches bahudula, indlela?
Ithi ngu iqiniso, ezweni mafutha-uwoyela zabantu 1.3 billion seliphindeke izikhathi ezingaphezu kuka-10 amalahle gasification amadivayisi alikho ngempela, kodwa ukusho, abatshalizimali abaningi bullish ngenxa amathemba kwezomnotho kwamalahle gasification. Ngakho okwehlisa yayo inzuzo futhi ukukhiqiza kube ube nesandla. Cishe unyaka, amanani kawoyela ngamazwe ewa phezulu, kokuwa kusukela lapho kungenzeka kube nokungqubuzana, yesikhathi eside ukushaqeka ongaphakeme empeleni amafutha ukuze olefins avelele evelele hhayi ubuchwepheshe kuphela usukhule kakhudlwana, futhi izindleko ushibhile. Yamalahle ukuze olefin inzuzo inzuzo kancane kancane wanyamalala ngesikhathi esifanayo, njengoba intengo PP, PE emakethe uyaqhubeka falling, imikhiqizo uwoyela kanye nemikhiqizo amalahle ukusakaza kulezi zinsuku ezimbalwa ezedlule ukuze unciphise, amalahle chemical umkhakha zamanani aphansi inzuzo ayisekho. Ngo PP, isibonelo, manje amalahle olefins amabhizinisi kusuka amalahle kuya polypropylene eluhlaza izindleko impahla, izindleko zezimali kanye nezindleko zokuphatha isamba azungeze 7000 Yuan / ton, ne PP intengo emakethe umehluko, ezinye izinkampani ngisho imali elahlekile, inzuzo , futhi esimweni, ukuthuthukiswa ikusasa amalahle olefins lingachazwa ngokuthi engaqondakali.
Yiqiniso, ngaphezu amanani aphansi kawoyela ukugwenywa kwamalahle ezifuywayo olefin ukukhiqizwa Ukwehla yephrojekthi eziyinhloko, ubuchwepheshe, inhloko-dolobha, Emvelweni futhi uchungechunge lwemibuzo, futhi enenhloso eyodwa ukushayela kule lane kancane. Wabikezela ukuthi uma amanani kawoyela international ukuhlala ngezithuba 50 zamaRandi emgqonyeni, babefanele ahlolisise Amathemba amalahle olefins kulindeleke.
PP amanani aqhubeke phansi maphakathi gravity "falling phezu" lapho?
PP eziyinhloko negative emakethe esikhathini esizayo esiseduze:
1 kanye izitobhi wanezela, ukushayela izitshalo ezintsha Petrochemical has okwamanje ezingavamile, akukho izinguquko eziphawulekayo emakethe supply.
2, funa yokugcina walandelisa ukukhathala, izimboni eziningi ethola phumula, uqhubeke okufunekayo izinto ezinhlelweni zokuthenga ukuze kugcinwe izinga lokukhiqiza evamile.
3 yokungabaza nokubusa, wesevisi, iningi kukhuphuke inzuzo okwabelana idili, ugcine yokusungula yayo ongaphakeme.
4, "imiphongolo ezimbili" Petrochemical amasheya falling, ex-imisebenzi ogawulelwé, amanani aphansi siqhubeke hit emakethe.
5, PP short ikusasa lezimakethe-evelele, nsuku zonke eziyisisekelo nge ukuvulwa ongaphakeme, okusithiyayo of indawo yokuhweba intshiseko, emakethe njalo ngaphansi kwengcindezi.
6, amanani international amafutha ababuthakathaka, naphezu ube nezikhathi ezinzima nezimnandi ngesikhathi, kodwa wehluleka ukuqhubeka, kodwa futhi kuthinte emakethe endaweni ngoba PP.
Dawn polyethylene emakethe ethule isikhathi eside kakhulu?
Kusukela emakethe, eziyinhloko ezithinta emakethe PE yilezi: umfula emakethe eziyisisekelo ukuze kwaneliswe isidingo iyona, izinqubomgomo amanani Petrochemical amabhizinisi kanye mkhuba komugqa ikusasa.
izimakethe Enhla: amanani kawoyela amazwe kusukela okusezingeni eliphezulu ngonyaka odlule $ 110 ekuseni ukwehla. Okwamanje, i-United States i-New York uwoyela ongahluziwe ikusasa amanani ukuntanta azungeze $ 40, Brent uwoyela ongahluziwe ikusasa amanani ukuntanta azungeze $ 44. Supply ukunciphisa, funa ababuthakathaka, okusezingeni eliphezulu ezikhona uwoyela ongahluziwe uzoqhubeka wokuvimba intengo, yokusungula okusezingeni eliphezulu usuku kwasuswa, intengo kawoyela Rebound ibuthakathaka. vinyl Asian, ngenxa supply Friend uphoqe ephansi, ukusekela ethylene amanani e-Northeast Asia Nokho, uma kuqhathaniswa nenani lesikhathi esifanayo ngonyaka odlule, ukusabalala namanje omkhulu.
Kubaluleka ukuze kwaneliswe isidingo iyona: njengoba izitshalo amalahle chemical okuncane, yesikhathi esifushane yokupaka kanye nokulungiswa ingozi kakhulu ngakho ngo-November, kodwa walahlekelwa ukukhiqizwa ngenxa yokupaka futhi ukulungisa kuphela abayizinkulungwane eziyikhulu namashumi zamathani, ngakho ingcindezi emakethe supply kusekukhulu . Okwalandela emakethe umthelela amalahle gasification iphrojekthi, Shenhua Yu Lin 300,000 amathani umthamo uyephuza kuze kube sekupheleni kuka-December kwethulwa, embozwe amathani 300,000 amalahle isitshalo ngoMashi ngonyaka ozayo kulindeleke ukuba bafake. Production amalahle gasification iphrojekthi, nakuba kunzima ukushaya isikhathi esifushane e PetroChina futhi Sinopec e umholi amapulasitiki emakethe, kodwa ngeke kancane kancane buthaka umkhakha kusukela ayitholwa inzuzo, emakethe ubhekana nezinselele. Demand, ngokomongo komnotho, i-amapulasitiki umkhakha akukwazi okuhlukile. Ama-oda, futhi izinto zokusetshenziswa kulo nyaka kuka eminyakeni eyedlule, i-plastic silwenza amabhizinisi ezinkulu kanye naphakathi ezisebenza 70%, amabhizinisi ezolimo ezisebenza 60% -80%, imboni isitokwe ugqozi abampofu, inani elilinganiselwe kwempahla iyonke, nzima ukusekela emakethe yamasheya. Noma funa ababuthakathaka isimo uyaqhubeka kuhlupha Outlook emakethe.
Petrochemical umkhakha: bedle uwoyela ongahluziwe / ikusasa ziyawa, uchungechunge zesifunda intengo Imi of Petrochemical, uwoyela, ukuguguleka ukwesekwa emakethe ngesikhathi esifanayo, kuyabonisa futhi ukuthi zikhona ezinye ingcindezi yokungabaza stock market anda, kuphumele emakethe evilaphayo jikelele kanzima. Ukuphela kule nyanga, amanani kawoyela ayeke falling emuva emakethe endaweni nokusekela eqinile omuhle, kodwa Rebound esimeme Kunzima ukuqagela emalini ikusasa uwoyela ongahluziwe kanye Futures Amathrendi Uzoqhubeka esibalulekile mayelana amanani Petrochemical.
On 2016 polypropylene umkhakha ukuthuthukiswa
Ngu-December, azungeze 2015, intengo eliphansi uwoyela ongahluziwe ngamazwe, eyodwa futhi izici eziningi ezingezinhle ezifana kwaneliswe isidingo ukungalingani hit, polypropylene e China ngisho lonke amapulasitiki umkhakha nokuwa, amanani falling, futhi esikhathini esizayo egcwele bomabuta. Nakuba eminyakeni yamuva, ukukhiqizwa kwe-polypropylene kulethe ubuchwepheshe, ukuthuthukiswa ubuchwepheshe inqubekela phambili kakhudlwana, kodwa impahla ekhethekile nge high value added esadinga ukungenisa ubuchwepheshe futhi ancike amazwe. Oluhambisana amanani imikhiqizo kazwelonke eMpumalanga Ephakathi, ecindezela izimakethe zethu, umncintiswano yebhizinisi babubukhulu ngokwengeziwe. Kanjalo. Kuphi ukuqala ukwenza eqa qualitative ngokuba yasekhaya kk abathengisa.
Nakuba isibalo polypropylene iyunithi, kodwa ngezinga elincane ukukhiqizwa, ukukhiqizwa owodwa iyunithi umthamo lilinganiselwe, okuholela ukukhiqizwa evilaphayo, ephakeme energy ukusetshenziswa. Ngakho-ke, kufanele sengeta out emuva umthamo production, ukhawule uhlelo umkhakha ukufinyelela ukuqinisekisa ukuthi iphrojekthi entsha kuleli isikali kanye nenqubo Usufike level ethuthukisiwe ngamazwe, ngcono ukuncintisana kwemakethe wamabhizinisi silwele lomkhiqizo kanye lomhlaba.
Okwesibili, ukuthuthukiswa ubuchwepheshe umthamo China sika, kufanele kwelekelele ikhono emisha ezimele kanye nekwakhiwa kwetimboni hamba embili ngemikhicito ucwaningo nentuthuko ngokushesha ngangokunokwenzeka, ngenkuthalo ethungatha ezweni polypropylene kulethe ubuchwepheshe kanye izicelo ukuze uthuthukise ulwazi ukuncintisana ubuchwepheshe zasekhaya, kunciphisa igebe phakathi ngenhloso ngamazwe.
Three zamanje umthelela copolymer imikhiqizo polypropylene imikhiqizo ongaphakeme iphesenti izinto, ezifana imikhiqizo ephezulu. Ukulungiswa isakhiwo umkhiqizo, ukuqinisa imizamo yayo ukuthi uthuthukise imikhiqizo emisha sesiseduze. amaphrojekthi amasha Ikusasa kufanele ugxile izinga okusezingeni eliphezulu, imikhiqizo eliphezulu value-added.
Laba basolwa, okubalwa elisungulwe yokuthengisa inethiwekhi, ngemigudu emakethe, unenkululeko ulungise ukukhiqizwa ukuhlangabezana emakethe ukufuna, nokwahlulela elungele ezimakethe izosiza izinkampani ugweme izingozi ezingadingekile.
PBT ntambo emakethe core-baphotha funa ngoba
Ezimakethe yendwangu sisonke wahlupheka lapho kufika ubusika, Tongxiang emakethe ke enye indaba. Kuyaqondakala ukuthi Tongxiang cored mbumbulu unogwaja izinwele ntambo emakethe njengomlilo ebusika, kufunwe blowout, ukuletha efudumele ukuze kuphole emakethe. Njengamanje, okuxubile ukotini ukuphotha core-baphotha umshini ntambo izesekeli, izinto zokusetshenziswa kuya PBT inayiloni, ethulwa eyindlala. Ngokusho nezibalo, bale ukotini up 35% kulezi zinyanga ezimbili, ukulethwa isikhathi esiyizinsuku ezingu-15; core accessory ye idivayisi izindleko rose 38%, esikhathini ukulethwa esidluliselwa kubo izinsuku ezingu-20. Ama-oda ntambo, kodwa kumele ihlelwe. Ngakolunye uhlangothi, emakethe muva ukuthenga ukukhanya agqoke angesabi baphotha eziningi, sina eyindlala isimo emakethe. Lokhu Flash fibre iDemo ukukhiqizwa ntambo core-baphotha Flash mbumbulu unogwaja izinwele izinto zokusetshenziswa.
Zhangjiagang ukukhiqizwa ifektri PBT ntambo core-baphotha
Ukuze eyinhloko iphakethe core base ukukhiqizwa ntambo Zhangjiagang de umkhiqizo edolobheni izimo, olandelanayo kulinganiselwa ukuthi okwamanje ukukhiqiza PBT iphakethe core imishini ntambo has eduze 400 Taiwan, lokhu inombolo namanje usaqhubeka rose, okwamanje ukukhiqiza yenawo imboni esemqoka bagxila isikali elincane ukucutshungulwa uhlobo imboni, ukukhiqizwa ingxenye imboni ingxenye has uye isigamu ngenhla, in the ezinkulu ammonia lun iphakethe core ukukhiqizwa ntambo ifektri ngokuqapha isihlobo, ingxenye izinzuzo ezingcono ammonia lun iphakethe core ntambo ifektri kungaqali ukukhiqizwa, kodwa PBT iphakethe core ntambo emakethe waqhubeka, Joyina PBT Ubuye inani elikhulayo izimboni ekukhiqizeni ntambo core-sasenza.
Kuyini PBT fibre?
PBT uhlobo polyester Imicu yotshani entsha, ngokuvamile kusekelwe Pta esterification ngqo BDO ekukhiqizeni, bese ibhekane yokusabela ukufingqa, bese ncibilika nokuwashwa PBT zesivikelo sesifuba. 30% 60% PBT fibre ukunwebeka, yokutakula nokunwebeka kuka-polyester inayiloni, spandex esikhathini esingaphansi; Ngaphezu kwalokho, PBT fibre has a rigidity omkhulu futhi wenza isimo ukuzinza, bulkiness, futhi zinyakaze muhle kakhulu, futhi uboya uzizwe, ngakho kwezinye izindawo lendwangu Ubuye enkulu ezingaba khona.
isakhiwo Plastic izifanekiso umugqa ukukhiqizwa for yokukhiqiza izici plastic ithempulethi
1, ukumelana namanzi ezinhle isakhiwo plastic izifanekiso umugqa production. Ngisho uma ngokugcwele emanzini izinsuku ezimbalwa, noma ukusonteka ngenxa umswakama. Ngeke ukubola ukugqwala.
2, kanye usimende ukungavumelani, ababambelela, ukukhululwa kalula ngemva ukwakhiwa noma ukusonteka ngenxa adhesion usimende.
3, ukusebenza kahle eliphezulu, okuhle izinga plastic isakhiwo izifanekiso ukukhiqizwa umugqa. Nge ukwakhiwa kwebhilidi amaqabunga abushelelezi, ngaphandle ukuguqulwa yesibili.
4, londoloza inqubo, ngcono ukusebenza kahle ukwakhiwa. Lapho isifanekiso icutshungulwe ngesikhathi esifanayo, Pretreat izifanekiso, uthole odongeni amaphethini.
PE plastic ishidi ukukhiqizwa umugqa amazwe imikhiqizo
Imikhiqizo yethu zokukhiqiza ishidi plastic PE yasekhaya umugqa, izingxenye eziyinhloko kagesi ezingenisiwe, ngezinga eliphezulu of ezishintshayo, isivinini ukukhiqizwa, operation lula, intengo esingaphansi 1/10 ye Isingeniso imishini efanayo amazwe. Ukukhiqizwa ipuleti izinkuni plastic nge imishini, PVC kanye nokhuni powder, isitshalo utshani njengoba impahla eluhlaza, extrusion inqubo yokubumba kusukela lomkhiqizo ukuhlangabezana nezidingo standard imikhiqizo efanayo angaphandle.
Ukukhiqizwa ipuleti umlilo-ubufakazi, umswakama-ubufakazi, izici umlilo-cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi, ezisetshenziswa kakhulu ukwakhiwa, umhlobiso kanye nokugcinwa kanye has ezibanzi emakethe ithemba nehlala njalo ukumaketha ezingaba khona. plastic Ngokhuni esikhundleni somuthi, ukuvikela imithombo ihlathi; plastic ngokhuni Tshala utshani, ukunciphisa ukungcoliswa kwemvelo; plywood amabhodi ukuqeda ukungcola ezimhlophe, hlobisa imvelo.
Izinqubo: sawdust (fibre) omiswe, engeza semali ukhuni yaba luthuli; Izinguquko ezincane, kodwa futhi angakhiqiza PVC foam ibhodi, irayisi bran kungaba bamelele izinkuni.
PE plastic ishidi ukukhiqizwa kuhambisana eziklanyelwe SJSZ92 oyindilinga isikulufa twin extruder, DC isivinini variable drive, izinga lokushisa nokulawula ithuluzi for brand amazwe, has a isivinini anhlobonhlobo, okusezingeni eliphezulu ngokunemba control lokushisa, kulula ukusebenza futhi enokwethenjelwa. Asizayo ithebula cleaner ekubumbeni, umshini traction, ukusika umshini futhi push uzimele.
Ziphethe kudivayisi ezinkulu indlu ukuqinisekisa ukuthi yi uthayela obumba. Track-uhlobo ugandaganda ngobuciko igiya motor futhi inverter, nge isakhiwo ezinengqondo, traction okukhulu, traction, ukuzinza nokunye. Ukuphuca umshini nge othembekile nonembile, ukuzisika high ukunemba befaneleka, ibenze yokubeka nge esikhiphekayo push Sibona bese iraba enamathela ekhethekile, hhayi lingamlimazanga impahla, kulula ukuyisebenzisa futhi njalo. Asizayo umshini iyunithi nge ehlelwe elawula uhlelo yokulawula ikhompyutha noma brand ezifuywayo, umshini ephelele elawula ukuzinza okuthembekile.
ukuhlaziywa Omfushane ukuthuthukiswa izinto emaphaketheni namazinga
China amapulasitiki ekufakeni izinto umkhakha isibe omunye izimboni ezinkulu, 2011 yethu lokugoqa okukhipha zezimboni safinyelela izigidi ezingu-130 Yuan, landa ngamaphesenti 20% ngonyaka, 2014 noma ukufinyelela 2 isigidintathu yuan, 14 zibalwa ezimbonini 42 ezinkulu kuleli zwe, isibe ngobukhulu United States iphakethe lesibili ngobukhulu emhlabeni. izinkampani Ukudla emaphaketheni lokulandisa mayelana 1/3,, eminyakeni 2013 kulo lonke amabhizinisi umkhakha emaphaketheni, epulasitikini China kucutshungulwa amabhizinisi ngenhla ubukhulu ukukhiqizwa esiqokiwe safinyelela kumathani ayizigidi ezingama-61,886, plus ukukhiqizwa amabhizinisi amancane micro amathani angaphezu kwezigidi ezingu-80 e-2014, ukusetshenziswa kwemikhiqizo plastic emaphaketheni lidlule engamathani ayizigidi ezingu-100, zazo, ezingaphezu kuka-20 million amathani plastic ukudla emabhokisini ngakho ukulondeka kwawo Ungase futhi seliyinto eshisayo.
Ngo impahla kanye plastic imikhiqizo yepulasitiki ku, futhi plastic resin kanye imikhiqizo yepulasitiki ukucutshungulwa mayelana ezihlukahlukene izithasiselo izinhlobo inezinto eziningi, ukuba kufinyelelwe plastic resin noma imikhiqizo aa izici, ekuqubunguleni ukwakha kule kumele thina babedinga ungeze buqhathaniswa ngcono ukucutshungulwa yayo ukusebenza noma izici, futhi lezi ukucutshungulwa izithasiselo for sawo isakhiwo izici usebenzisa inqubo esikhathini noma imikhiqizo abuzange ukuzinza, ukuze kwaholela igesi eziyingozi oluyingozi futhi ukuthuthela kwelinye, ukuze abantu ukuphila kuletha has kumele yezinto ezimbi.
Ikakhulukazi, singazi alawule zebhizinisi njalo ukuphishekela izinzuzo. Ukusetshenziswa Heavy of izinto ezingafanele yoqobo ukukhiqizwa, okuholela emakethe ukudideka; abanye amafemu amancani cottage. Wona izinto zokusetshenziswa lisebenzisa kukhona esisemthethweni, kule nqubo, musa ukuhlangabezana nezidingo zokukhiqiza ukudla emabhokisini ubuchwepheshe, ukukhiqizwa akusho nezidingo umkhiqizo wokugcina, uletha emakethe baliklasi lonkhe edukisayo.
Ngakho emhlabeni plastic impahla ukudla emabhokisini yenkinga yokuphepha Bekulokhu kucatshangwa baba abantu ukunakekelwa kakhulu ashisayo, China ngenxa umkhakha plastic oqale, nokuthuthukiswa ngokushesha, zakuleli omkhulu, kwaholela ekubeni abanye ofihlekile emelene ezifike ngesikhathi ezisencwadini, zilandele izilinganiso zamazinga endaweni isikhathi futhi isigaba emakethe oluhambisana, lokhu ezinye elincane workshop uhlobo imboni kwesokunxele has a ukusinda isikhala, ngenkathi futhi umkhakha kuletha uye engakhi umphumela.